Apple Park yakatove yakanyorwa semahofisi makuru eApple | Ndinobva mac
Apple Park yakatove yakanyorwa semahofisi makuru eApple
Vamwe vanoti ibasa rekupedzisira rakakura raSteve Jobs. Uye chikonzero nei vachishaiwa: iyo Apple Park ndiyo imwe yezvishamiso mega-zvivakwa zvatakaona mumakore apfuura. Kunge zvigadzirwa zvevatengi zvakatangwa nevaya vanobva kuCupertino, iyi Apple Park yakagadzira mufaro mukuru pakati peveruzhinji. Uye pamusoro pemwedzi takakwanisa kunakidzwa nekufambira mberi kwavo kubva pakuona kwedrone.
Kunyangwe mumavhiki apfuura, vazhinji vevashandi vanga vachienda kumuzinda mutsva, maemail eApple nekero yepamutemo yanga iine kero yekare, One Infinite Loop. Izvi zvakaitika kusvika vhiki rapfuura, umo iyo Apple Park, pakupedzisira, yatove iyo nyowani hofisi yepamusoro yeApple mumagwaro ako ese.
Tiri kuwana marudzi ese enhau kubva kuApple Park. Isu tinoziva kuti kuchine mamwe makona anofanira kupedzwa, kunyanya nzvimbo dzegirini. Uyezve, isu tine humbowo pane vhidhiyo. Saizvozvo, mahwindo mahombe echivako ari kukonzera tsaona pakati pevashandi veApple sezvavanowanzo gunda mukati mavo. Kana, kuti iyo Cupertino Guta Kanzuru kupihwa mvumo yekugara 5 yezvikamu gumi nezviviri zvine chivakwa chitsva.
Sezvatakakuudza, kusvika mazuva mashoma apfuura, One Infinite Loop yaive dzimbahwe repamutemo reApple. Nekudaro, kubvira 9to5mac vakazviona Kuburikidza neemail kubva kuApple Music service kambani iyo pazasi peiyo email kero yakanga yachinja. Zvirokwazvo, ikozvino Apple Park.
Uyezve, kana iwe ukashanyira peji raApple, muchikamu che "Bata", uchakwanisa kuona kuti shanduko yakaitwa zvechokwadi uye kero yemubatanidzwa ikozvino "Imwe Apple Park Way". Isu tinofungidzira kuti mabasa anenge apera uye zvichave izvo apo ivo pakupedzisira pavanozowana mvumo izere yekugara zvese zvikamu zvemuzinda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple Park yakatove yakanyorwa semahofisi makuru eApple
Chenesa maforodha ako kubva kumafaira asina basa nekukurumidza neNuclear Folder